हामीकहाँ एउटा पुरानो उखान छ- जुन गोरूको सिंग छैन, उसको नाम तिखे। मदनकृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्यले यो उखानलाई समसामयिक सुधार गरेर यस्तो बनाए- जुन देशमा पेट्रोल छैन, त्यही देशमा वान-वे! आजको समय-सन्दर्भसँग मिल्दोजुल्दो गरी उक्त उखान संशोधन गर्ने हो भने यस्तो भन्नु उपयुक्त होला- जुन देशले खोप दिन सक्दैन, ...
गोरखा : मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशन(एमएनओ)ले बाहुन-क्षेत्रीलाई शरणार्थीको संज्ञा दिँदै कुनै दिन नेपालबाट खेद्न सक्ने चेतावनी दिएको छ । गोरखा, लम्जुङ, तनहूँ र कास्कीको संयुक्त ३३औ स्थापना दिवस समारोहमा बोल्दै केन्द्रीय सभाका प्रवक्ता दिलिप धिमालले जनै र धोती मात्र लिएर शरणार्थीको रुपमा नेपाल छिरेका बाहुन क्षेत्रीलाई कुनै दिन यो देश छोड् ...
दुई सय करोडको मुद्दामा जोडिएपछि सलमानको ‘द ब्याङ्ग टूर’बाट बाहिरिन् ज्याकलिन काठमाडौं । बलिउड अभिनेता सलमान खान आफ्नो नयाँ चलचित्र ‘अन्तिम’को रिलिजपछि शुक्रबार रियादमा कन्सर्ट गर्ने तयारीमा छन्...
काठमाडौं-अभिनेता बिपिन कार्कीले चर्चित बलिउड अभिनेता अनिल कपुर र रणवीर कपुरले अभिनय गर्ने फिल्म ‘एनिमल’मा अभिनय गर्ने...
काठमाडौं। घरमा पालेको कुकुरले टोकेर २ हप्ताका बालकको मृत्यु भएको छ । खासमा कुकुरले ती बालकलाई खेलौना...
कपिलवस्तु : श्रीमतीलाई मा’रे’को अभियोगमा एक जनालाई प्रहरीले सात वर्षपछि पक्राउ गरेको छ । आगो लगाएर श्रीमतीको...
हामी भारा काहुमा ठूलो संख्यामा उभिएका छौं । हामीलाई न हाम्रा आफन्तको शव दिइएको छ न अगाडि...
काठमाडौ। अभिनेत्री अनु शाह अभिनयका कारण भन्दा पनि प्रेमका कारण बढी चर्चामा छन्। उनको अभिनेता सविन श्रेष्ठसँगको...
आजदेखि अमेरिकाले दिएको जोन्सन खोप लगाइँदै, यी हुन् काठमाडौं उपत्यकाका खोपकेन्द्र र खोप लगाउन पाउने समूह (सूचीसहित)
घरमा पालेको कुकुरले २ हप्ताका बालकलाई मार्‍यो, बच्चालाई खेलौना ठानेर खेलिरहेको थियो काठमाडौं। घरमा पालेको कुकुरले टोकेर २ हप्ताका बालकको मृत्यु भएको छ । खासमा कुकुरले ती बालकलाई खेलौना...
अब फेरी विदेश जान नपाइने, खतरा बढ्यो भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गर्यो यस्तो अपिल काठमाडौ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अत्यावश्यक नपरी विदेश भ्रमणमा नजान आग्रह गरेको छ । अफ्रिकी मुलुकहरूमा...
म्याराडोनाको मुटु आधा किलोको थियो, मुटु निकालेर गरिएको थियो अन्तिम संस्कार ! एजेन्सी । डिएगो म्याराडोनालाई नोभेम्बर २५, २०२० मा ६० वर्षको उमेरमा मृ त घोषित गरिएको थियो, तर...
भोलि नेपाल बन्दको घोषणा,सवारीसाधन चल्नै नपाउने, पसलहरु के हुन्छ ? काठमाडौँ : नेपाल कम्युनस्ट पार्टीले पेट्रोलियम, खाद्यान्नलगायत हरेक सामानमा सरकारले मूल्यवृद्धि गरेको विरोधमा भोलि मङ्गलबारका लागि आह्वान...
काठमाडौं । बलिउड अभिनेता सलमान खान आफ्नो नयाँ चलचित्र ‘अन्तिम’को रिलिजपछि शुक्रबार रियादमा कन्सर्ट गर्ने तयारीमा छन् । ‘द ब्याङ्ग टूर’ नाम दिइएको यो कन्सर्टमा
काठमाडौं-अभिनेता बिपिन कार्कीले चर्चित बलिउड अभिनेता अनिल कपुर र रणवीर कपुरले अभिनय गर्ने फिल्म ‘एनिमल’मा अभिनय गर्ने भएका छन् । रणवीरको मुख्य भूमिका भएपनि
सानो पर्दाको सबैभन्दा चर्चित रियालिटी शो बिग बोसमा आएका धेरै प्रतियोगीहरुको प्रेमकथा सुरु हुने गरेको छ । बिग बोसको यो सिजनमा प्रतियोगी तेजस्वी प्रकाशले